Audio afduubato Pro for Mac Review | MacArsenal
> Resource > Mac > anshaxa xun Amoeba Software: Audio afduubato Pro for Mac
Anshaxa xun Amoeba Software: Audio afduubato Pro for Mac
Audio afduubato Pro? Gebi ahaanba ka beddesho sida aad u isticmaali audio on your computer, kaas oo laguu suurogeliyo in aad hesho xoriyadda in ay dhagaystaan ​​audio sida aad u rabto iyo marka aad rabto. Iyadoo Audio afduubato Pro, waxaad tahay si ay u qoraan iyo kor loogu qaado audio karti - waa aasaaskii aad waayo-aragnimo audio digital.?
Record iyo kor loogu qaado audio
Audio afduubato Pro suurtogelin doontaa in aad si ay u qoraan audio codsiga kasta, ka DVD maqal ah si durdurrada Internet iyo meel walba ee u dhexeeya. Audio afduubato Pro waa in ay u qoraan haddii mashiinka u ciyaari karaa awoodaan. Iyo in aan ka dhan - Audio afduubato Pro sidoo kale waa ay awoodaan in ay kor u audio kasta, iyada oo la isticmaalayo AudioUnit saamaynta audio iyo warshadaha VST-caadiga ah si aad music dhawaajiyaan la yaab leh.
Duubo Quick oo horena
Thanks to Audio afduubato Pro, waxa aad awoodi kartaa in balan lagu duubo si toos ah ugu maalmood gaar ah iyo saacadood ee toddobaadka codsiyada badan, sida Skype, Safari, iChat ama Lugood. Sidaas xataa haddii aad mashquul wax kale samayn yihiin, waxa kale oo aad ka heli kartaa duubo adigoo isticmaalaya codsigan. Marka laga reebo tan function duubo horena, waxaad ka heli doontaa in ay jirto shaqo deg deg ah record ee Audio ka afduubato Pro oo u suurta galinaya in aad u qoraan audio ee waqti gaaban.
Editor ee dib u eegida:
Sida lagu Ronie audio-duubo diyaar u ah Mac, Audio afduubato Pro fiicna audio ka qalabka sida mikroofanada, ama codsiyada, ama ilo kale oo ka shaqeeya via aad mashiinka qabsaday.
Laba-paned, nadiif ah, Lugood-sida interface Audio afduubato Pro ee xoogga ilo in aad awood u qabsadaan - taas oo macnaheedu yahay uun ku saabsan wax kasta, ka software in hardware. By default, waxaa jira qaar ka mid ah dadka la tuhunsanayahay ee caadiga ah oo laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u qoraan (DVD Player, Lugood, iChat, RealPlayer, QuickTime Player, habka aad audio, Safari, Skype, iyo nidaamka default input) in ay leeg- bidix. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku dari kartaa ilo dheeraad ah, sida qalabka ama barnaamijyadooda kale fudayd weyn.
Waxaad u qeexi karaan goobaha kala duwan ee il kasta oo app ee Murayaad xaq - oo ay ku jiraan jadwalka duubo, tags, iyo tiro badan oo ah saamaynta audio - iyo tani waa meesha aad ka heli doontaa inta badan muruqa in feature set Audio afduubato Pro, sida sidii awood u leh inuu qeexo qaabab si deg deg ah oo ay maamulaan qabnay (haddii la AppleScript ama Automator). Dhanka kale, xitaa bilowga ah ka heli doonaa badan oo aad jeceshahay in Audio afduubato Pro, sida duubo hal-taabashada ah ee wada hadalka iChat iyo Skype.
Audio afduubato Pro ma kaa caawin doona in tafatirka audio - you'll u baahan editor u fiican in - laakiin waa, qiimaha cajiib ah oo dhamaystiran kuwa isku dayaan in ay qabsadaan audio on Mac ah.
Sidee ku cadaadisaa Audio Files
Free Studio Mac: Beddelaan Video / Audio / DVD, Guba / Copy DVD, Download Video
Kaabta Your iPhone Data si Mac hor Casriyaynta in macruufka 7
6 Siyaabaha tirtirto folder on Windows / Mac
Xakamee Samsung Kies ee Mac Gebi
Soo Celinta Mac iyadoo la kaashanayo Recovery HD
Adobe Rashka CS4 u Mac
Mactubes for Windows: Download Streaming Videos la One Click
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Mac si iPhone & ka iPhone si Mac